UK Tsika | Yangu Mota Kunze
Tsika Yekunze Duty UK & VAT kana uchipinza mota kuUK
Chero mota iri kuunzwa kuUK inoda kujekeswa kuburikidza netsika
Nemakumi emakore echiitiko chekubata netsika dzeUK, Yangu Mota Kunze yakave nyanzvi mukubvumidzwa kwetsika, kujekesa mota kuburikidza neichi chiitiko zvisinei kuti vakapinda mukati kana kunze kweEurope kana mhando yekufambisa.
Kune chero zvinounzwa kunze kweEurope, tsika yedu yekubata zvakare inosanganisira HMRC NOVA system manejimendi. Kune chero zvinounzwa mukati meEurope, isu tinobatsirawo HMRC uye tinovazivisa nezvekusvika, kuti vawane NOVA referensi yeDVLA.
Kuva nemutengesi wekupinza mota unobata nemaitirwo ako pachinzvimbo chako kunoona kuti hapana zvikanganiso zvinoitwa nemhando dzakasiyana dzekubvisa tsika dzinoenderana nemota dzakasiyana, zvinoenderana nezera, nzvimbo yekugadzira, mhando yemota, muridzi nezvimwe.
Chinangwa chedu chikuru ndechekuita iyo nzira yese yekuunza uye kujekesa tsika sezviri nyore sezvinobvira.
Uri kuendesa wega mota yako here?
Imotokari dzinounzwa kunze kune dzakavanzika dzinowanzozonzi 'zvakavanzika kupinza'. Isu tinobatsira neicho chiitiko chekupinza mota yako uye sezvakatsanangurwa pamusoro apa tinogadzirisa maitiro eku'bvisa 'mota yako kuUnited Kingdom.
Kunze kwepachivande kuchave nemutero uye mutero unoshandiswa pakupinda muUK. Izvo hazvitaridzwe seyakavanzika yekutumira kana iwe uri kunyorera mutero kubatsirwa kuburikidza neTOR (kuchinjisa kwekugara) chirongwa.
Tinogona kubatsira kupinza muchivande mota yako uye nekubatsira nerondedzero yechero ipi inogona kuve mutero.
Uri kutengesa nekutengesa mota yako here?
Yese mirau yakafanana inoshanda kupinzwa kwemotokari kushandisirwo kunze kweiyo nhamba yeVAT inodiwa kuti uve nechokwadi chekuti unogona kudzoreredza VAT.
Maitiro ekubhadhara mutero akatisiyanei zvishoma nemotokari yekutengesa asi isu tiripo kuti tikubatsirei nemimwe mibvunzo.
Kana iwe uchida kuti inyoreswe mushure meizvozvo isu tinogona zvakare kubatsira nechikamu icho cheichi chiitiko.
Uri kuronga kupinza kwenguva pfupi mota yako?
Kana iwe uri kuronga nezvekushandisa mota yako kwenguva pfupi muUnited Kingdom hazvidi kuti unyoreswe zvachose muUK.
Muzviitiko zvakawanda, kana mota ichingozove muUK kwemwedzi mitanhatu, inogona kupinzwa kwenguva pfupi.
Mota yako inoda kuve neinishuwarenzi hazvo.
Mune zvimwe zviitiko, unogona kuiisa inishuwarenzi pane yako nhamba ndiro asi kune dzimwe mota, vangangoda kuve inishuwarenzi paVIN.
Isu tinopa kuunganidzwa kubva kuchiteshi mushure mekubvumidzwa kwetsika?
Kusiyana nevamiriri vekutakura, isu tiri yakazara-sevhisi mota inounza izvo zvinoreva kuti isu tichagadzirisa maitiro kana mota yako yasvika muUnited Kingdom.
Ukasangwarira mota yako inogona kunamirwa pachiteshi iyo inogona kukubhadharira kupfuura kukosha kwayo. Isu tinounganidza mota nguva dzose kubva kuzviteshi uye tinoziva maitiro acho.
Rumwe ruzivo rwekutamisa vagari:
Zvinodhura zvakadii kutumira mota kubva kuAustralia?
Kurongedza mota yako?
Chii chinonzi TOR fomu?
Chii chinonzi kuchinjisa kwekugara UK?